Lọ ahịa dị ọnụ ala dị ala karịa ịzụ ahịa maka louis vuitton, cartier, chanel, gucci na prada
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịzụ ahịa » Lọ ahịa dị ọnụ ala dị ala karịa ịzụ ahịa maka louis vuitton, cartier, chanel, gucci na prada
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ejiji • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Ịrụ ọrụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
USA bụ otu n'ime mba ndị dị ọnụ ala iji zụta ejiji ndị nrụpụta, yana ọtụtụ ihe eji eme ihe dị elu na-efu ihe kacha nta na US.
USA bụ obodo kachasị mma maka ezumike ịzụ ahịa ndị mmebe.
Europe bụ otu kọntinent dị ọnụ ala karịa ịzụ ahịa.
Mba ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Esia so na ụfọdụ n'ime mba ndị kachasị ọnụ iji zụta ngwa ndị nrụpụta.
Iji kpalie njem ezumike post-COVID gị, ndị ọkachamara na njem njem UK enyochala ọnụ ahịa ngwa ngwa okomoko dị mma gburugburu ụwa, iji kpughee mba ndị dị ọnụ ala (na nke kachasị ọnụ) iji zụta atụmatụ ndị kachasị mma. ChanelAkụkọ mgbe ochie 2.55 ruo Foto Mgbaaka ịhụnanya.
USA bụ otu n'ime mba ndị dị ọnụ ala iji zụta ụdị ejiji, yana anọ n'ime ihe okomoko dị na ndepụta ahụ, gụnyere Chanel 2.55 na Cartier Love Bracelet, na -efu nke kacha nta na USA. N'ezie, ị nwere ike chekwaa ihe ruru £ 4,813 site na ịzụ ahịa na USA ma e jiri ya tụnyere mba ofesi.
Europe bụ otu kọntinent dị ọnụ ala karịa ịzụ ahịa, yana 5 n'ime obodo iri na abụọ dị ọnụ ala na Europe. Ị nwere ike chekwaa ihe ruru £ 12 site na njem gaa Europe maka njem ịzụ ahịa okomoko gị maka ihe gụnyere akpa Fendi Canvas Baguette na Louboutins New Very Prive.
Mba ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Esia so na ụfọdụ n'ime mba ndị kachasị ọnụ iji zụta ngwa ndị nrụpụta, yana 9 n'ime ebe 12 kachasị ọnụ iji zụta ụdị okomoko dị na East Asia. Enwere ọtụtụ ihe nwere ike itinye aka na nke a, gụnyere tarifụ dị na ngwongwo ndị si mba ofesi dị oke ọnụ na China, ọnụego mgbanwe nke pụtara Yuan karịa ego ndị ọzọ dị ukwuu yana ịrị elu dị elu maka ngwaahịa ndị nrụpụta na China na South East Asia.
Ebe dị ọnụ ala na nke kachasị ọnụ iji zụta ụdị ejiji
Akpa Louis Vuitton Speedy 25
Ebe dị ọnụ ala ịzụrụ: Denmark - 6,600 DKK (£ 765)
Ebe kachasị ọnụ ahịa ịzụta: New Zealand - NZ $ 1,940 (£ 999)